Fiakaran’ny tosi-drà! – Malag@sy Miray
Tena anisan’ny aretina mitarika ny fahafatesana ny fiakaran’ny tosi-drà ka tokony ho mailo ny rehetra @ izao vanim-potoana misy antsika izao mantsy dia maro ny tanora no be tosi-drà ka mety misy ny tapaka lalandrà raha tsy voaramaso sy manaraka fitsaboana tsara!
Betsaka ny mety mahatonga io tosi-drà miakatra io mety avy @ fifohana sigara na fisotroana taoka be laotra fa ny tena tiana hisarihina ny saintsika dia ity sakafo matsiro sy be menaka ity ary indrindra dia ny fihinana ny hen’omby! iza moa ny malagasy tsy hilela molotra raha manoloana lasopy tongotr’omby na silamangany! tena sakafo tian’ny malagasy tokoa izy ity kanefa dia mampavesatra ny rà mikorina @ vantana satria tsy levona ny menaka entin’izy ireny ka manery ny lalandrà! tokony ho lanjalanjaina izany ny sakafo hoanina na mifady sakafo rehefa hita oe misy ny fikaran’ny tosi-drà!
Fa ny tena tiako iadiantsika hevitra eto dia ity sira misy ioda ity e! satria mantsy voalaza fa io ioda io koa no tena manafaingana ny fahatapahan’ny lalandrà! betsaka mantsy ny olona milaza oe ahahy na atapy andro izy ireny dia miala ilay ioda ao anatiny kanefa nisy « chimiste » nanotaniako momba an’io dia tsy mitombona velively ny fanahazana ny sira io dia manala ny ioda ao anatiny?
fehiny, tsara izany ny tanora raha mijery sy manaramaso ny tosi-drà any @ mpitsabo ary raha tahiny ka ambony ny tosi-drà dia aleo mihinana fanafody fa tsy hanao dokotera tena @ fihinanana tongolo gasy sy ny fisotroana tambavy fotsiny! ny fetrany mantsy no tsy voakajy tsara ka eo no mety ho zava-doza raha miaotra ny dôzy hoanina lasa mitarika aretina hafa indray avy eo!
Par news2dago 3 Commentaires
30 janvier 2008 à 9:42
[quote post= »358″]fa ny tena tiana hisarihina ny saintsika dia ity sakafo matsiro sy be menaka ity[/quote]
Izaho mahita hoe, any Madagasikara, atao hoe olona tafita, maha izy azy, rehefa misakafo tsara, be, ary matsiro ka hita ny olona rehetra (izay be kibo be vola ve? 😀 ); any ampita, ny olona izay manan-tsafidy dia mikarakara vatana sy mitandrina an’i fahasalamany, dia mifidy sakafo, manao sport,activités, sns..
Je m’exprimerai mieux en disant qu’il y aurait aussi une connotation sociale car je doute que ce soit le tireur de pousse-pousse qui soit sujet à l’hypertension, na dia ninana lasopy tongotrsquowhawydomby na silamangany 🙂 .. Mais j’y verrai mieux un jeune cadre dynamique, gagnant raisonnablement sa vie, bien portant, bien calé dans son fauteuil à tapoter l’ordi.
Vazivazy ihany io. Fa izaho mahita hoe nenatavy marina ny gasy, izany hoe hitako maro kokoa ny olona matavy. Nefa tsy mino aho hoe lasa ampy sakafo kokoa ny be sy ny maro. Ary sady isika izany tsy tia manao sport e, afatsy rallye sy taomobilina lava. 🙂
[quote post= »358″]Fa ny tena tiako iadiantsika hevitra eto dia ity sira misy ioda ity e! [/quote]
Ny iode aloha dia tena ilain’ny vatana e. Fa amiko, tsy dia ny ioda laotra ny fanontanina, fa ny quantité any. Ny gasy, indrindra ny lehilahy, dia tia sakafo be sira. Izaho dia gaga mihitsy rehefa mahita ny cousins-ko, fa sira izany ampina izany! Io be sira io no tena ratsy ho an’i tosi-drà.
info sur le sel iodé
Ny ahy indray aloha ny mahagaga ahy dia « ny fihinana ny hensquowhawydomby » na hena fotsiny.
Raha mahatsikaritra ianareo dia zavatra tian’ny malagasy sy ny afrikanina ny hena (eritrereto kosa moa koa omby iray isak’olona anie ny isan’ny ombintsika any Dago hono e!taloha). Ary rehefa tonga aty andafin’ny riaka aty isika dia manararaotra be mihinan-kena-kisoa, omby, ondry, sns…voalohany sady mora izy no taka-bidy hany ka in-droa isan’andro no manjary mihinan-kena, sady amizay tiantsika kokoa izy atao sôsy no sady endasina amin’ny menaka. Dia lasa botrabotra kelin’ny menaka daholo,hihihi dia ozy ny olona any dago hoe : tsara be ny cosmétique-tsika aty nefa menak’hanina daholo ireny mahamandimandina ireny
Mafy ihany ny fitiavan-kena kà!
25 mai 2011 à 8:41
Ny any mba teniko de izao e! marina daholo zany voalaza izay fa eo ihany koa ny rotompiainana fiasan’ny saina be loatra miteraka
STRESS io koa no mahatonga ny tosi-drà hiakatra mirary antsika rehetra ho salama hatrany!